Home News Kooxda Qiyaano Qaran Burburka Ka Daaya Golaha Shacabka
Kooxda Qiyaano Qaran Burburka Ka Daaya Golaha Shacabka
Waxa halki ugu xuma maraya dagaalka tooska ah ee lagu so qaday Gudoomiye Jawaari iyo Golaha Shacabka iyado ay sababtay in Gudoomiye Jawaari uu xalay soo hor fadhiisto warbaahinta isago muujiyay in weerar lagu yahay jiri taanka Dowladimo ee Soomaaliya.
Hadalki Gudoomiye Jawaari ee xalay waxa uu dad badan oo ka indha la’aa Kooxda Qiyaano Qaran uu bananka keenyay iyado hadalo dhorw ah uu Gudomiye Jawaari uu Bulshada Wax ugu taabtay isago ay u muuqatay mid diidana xasarada siyaasaded ee dalka in ay si xumaato.
Waalida xogan ee Xukuumada oo uu dabada ka riixayo wiilka MD Farmaajo aya umuuqata mid ay ka careysan yihin diidmada heshiiski uu shegay in gudoomiye Jawaari uu diday isago shegay in uu ubaqay jiritanka dowladnimo oo ay wiilka iyo seydigiisa ay oo talada dalka sidey donan ka yeleyan.
Weerarka lagu qaday baarlamanka aya waxa uu shacabka soomaaliyeed u muujinaya in uu jiro heshiis ay wadan Farmaajo iyo Kheyre oo halis ku ah jiritanka umada Soomaaliyeed iyado an horey idinku ftiminay hedhiskasi uu didan yahay jawari.
Madaxweyne Farmaajo oo caado an laga xishoon ka dhigtay in uu fadhiisin ka dhigto Wasaarada Gashandhiga xiliga ay xukuumada qas iyo foodo ay ka geysaneyso dalka aya waxa ay tahay mid mujineyso in arimahan uu wax badan kala socoyo inkasto si maldahan logu shego in mooge ka yahay.
Iyado inta badan an arki jirnay baarlaman eryanaya Xukuumda hada waxa muuqata in Xukuuada iyada ay eryaneyso Barlaamnki oo ah golaha Sharci Shacabka iyado ay matalan guud ahn shacabka soomaaliyeed.
Hadaba heshiiska uu diidy Jawaari oo aha mid sharci daro aha laguna donayay in dalka lagula wareego sido kalena xildhibanada lakala diro iyado xildhibanda lagu cadadinkaro taasi oo uu jawari uu diday,iyado Moshinkan iyo foodada Xukumada ay bananka uso baxday marki ay baarlamanku fududeyen heshiiski DP World oo ay durba hordhigeyn Aqalka Sare iyado ay saxiixeyn in gabi ahanba dalka laga Mamunuuco Shirkadaai.
HADABA MAXAY XUKUUMADU U BAACSANEYSA BAARLAMANKA?
MUXU DHAB AHAN YAHAY HADALKA JAWAARI EE HESHIISKA LA ISKU HEYSO EE KA LEXLEXDAY IN UU DHAMEYSTIRO?